IVA 4T ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံးနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- IVA 4T
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: IVA4T
Viet An is the leading supplier for IVA4T 4ton Industrial Stainless Steel Tube ice making machine (100% New)
Viet An သည် IVA4T ၄ တန်စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်(၁၀၀% အသစ်)များကို ဦးဆောင်ပေးပို့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
With 20 years of experience in manufacturing and supplying the Industrial ice-making machine , Viet An is proud to be the leading company in this industry.
စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက်များကို နှစ် ၂၀ နီးပါး ပေးပို့လာတဲ့ အတွေ့အကြုံအရ Viet An သည် စက်ရုံမှာ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
The machine is produced according to American technology, With smart and compact design, the machine offers an easy installation, safe and stable operation, low maintenance cost and energy saving.
ဒီစက်ကို အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာအတိုင်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ စမတ်ကျပြီး သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းကြောင့် အလွယ်အတူ တပ်ဆင်နိုင်တယ်။ စိတ်ချရပြီး တည်ငြိမ်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်တယ်။ ထိန်းသိမ်းဖို့ အကုန်အကျနည်းတယ်။ အင်နာဂျီချွေတာနိုင်တယ်။
IVA4T4ton tube ice making machine is widely chosen by the customers thanks to its convenience, savings and safety.
IVA 4T ၄ တန် ရေခဲထုတ်စက်က အဆင်ပြေပြီး ပိုက်ဆံလည်း ချွေတာနိုင်ကာ လုံခြုံစိတ်ချမှု ပေးတာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေမှ အများကြီး ရွေးချယ်ကြပါတယ်။
IVA4T 4ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New)
IVA4T ၄ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)
IVA4T 4ton Industrial Tube Ice Making Machine (100% New) is produced according to the most advanced technology in 2019. All the components to constitute the machine are 100% new and of high quality, bringingalong operation durability of 15 years. However, to reach this quality level, the machine price is higher than the price of other machines of the same type in the market.
IVA4T ၄ တန် စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ စက်တွင် ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများ အားလုံးသည် ၁၀၀% စစ်မှန်ပြီး ကွာလတီမြင့်တဲ့အတွက် ၁၅ နှစ်ထိ ကြာရှည်ခံပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလို ကွာလတီဖြစ်ဖို့ ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အမျိုးအစားတူစက်တွေထက်တော့ ဈေးပိုကြီးပါတယ်။
To see more details about the outstanding benefits of the machine, go through the article below.
စက်ရဲ့ ထူးချွန်တဲ့ ကောင်းကျိုးအစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ အောက်က ဆောင်းပါးတွင် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
Imported Compressor (100% New) - Only in Viet An
တင်ပို့ထားသော ဖိသိပ်စက် (၁၀၀% အသစ်)- Viet An တွင်သာ
Currently, only Viet An is applying the new compressor for ice making machines. Our compressors are produced according to the latest technology, bringing the highest durability. All of our compressors are produced in the foreign countries under strict quality control. It is manufactured in an absolutely automatic CNC system with automatic cutting, pressing and molding processes. After that, it is transferred to the high pressure testing machine - the best high pressure testing machine imported from German.
The air compressor is used for the ice-making machine. It absorbs cold air and exhausts hot air. The liquid and gas separation system is designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
Several causes of compressor damageSeveral causes of compressor damage
Damaged valves due to excessive liquid remained.
Broken connection rods due to excessive liquid remained.
The compressor cannot evenly distribute the air within the inner system due to excessive liquid remaining.
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက ဖိသိပ်စက်က အတွင်းစနစ်အတွင်း လေကို မဖြန့်နိုင်အောင် ပြုလုပ်တယ်။
Excessive liquid affects other parts.
အရည်တွေ ကျန်နေခြင်းက အခြားအပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေတယ်။
The liquid and gas separation system is therefore designed to separate liquid from the inlet air to ensure no liquid remains in the air before it is routed into the airline in order for the compressor to operate smoothly, thereby improving the machine's shelf life.
Image of the condenser
အခိုးကို အရည်ဖြစ်စေသည့် ကိရိယာ ပုံ
Image of the cooling tower
The electrical system used for Viet An’s ice making machines is absolutely automatic. The machine will immediately start with only one on/off button. The system will automatically stop when there is an electrical problem incurred. In addition, the customers can choose to purchaseaseparate electrical system with TLC programming. The system is optional.
Images of the exclusive components
Let's imagineanew and an old ice making machine with the same capacity, then:
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တူညီတဲ့ ရေခဲထုတ်စက် အသစ်နဲ့ အဟောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်
This does not include the expenses to resolve the errors during the operation with the old machine. During these2years, the old machine can generate stable performance while the old one cannot assure this. Even if there are no errors during the first2years, until the 3rd year, the old machine will surely operate much better than the old one. With above information, it’s your right to chooseanew or old machine.
ဝယ်ယူသူတွေ ဘာတွေ ပြောကြလဲ
High-end product, competitive price and high durability.
ပစ္စည်းတွေက အရည်အသွေးမြင့်တယ်။ ဈေးနှုန်းချိုသာတယ်။ ကြာရှည်အသုံးခံတယ်။
Most machine components are made from 304 stainless steel, providing high durability andashiny appearance. Besides, this premium material also helps to givealong life of at least 20 years. It is resistant to various weather conditions, so it is suitable for ASEAN and Asian countries. Thanks to compact smart design, the ability to operate smoothly, low noise, simple cleaning, saving energy, saving space, and saving production costs.
စက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း အများစုကို စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ကြာရှည်ခံကာ တောက်ပတဲ့ ပုံစံရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီပရီမီယမ် သတ္တုက အနည်းဆုံး နှစ် ၂၀ နီးပါးခံအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ၄င်းက ရာသီဥတု အခြေအနေမျိုးစုံကို တောင့်ခံနိုင်ပြီး အာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ သိပ်သည်းသော စမတ်ဒီဇိုင်းကြောင့် ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်တယ်။ လွယ်ကူစွာ ဆေးကြောနိုင်တယ်။ အင်နာဂျီ ချွေတာနိုင်တယ်။ နေရာ ချွေတာနိုင်တယ်။ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်လည်း ချွေတာနိုင်တယ်။
With the utilization of purified water sources, the machine brings ten finest quality of the finished products, ensuring6-1:2010 /BYT standards of the Ministry of Health.
ရေသန့်အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုတာကြောင့် စက်က ပြီးသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် ကောင်းမွန်သော ကွာလတီ ၁၀ ခုကို ယူဆောင်လာပေးပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ 6-1:2010/BYT စည်းမျဉ်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
The electrical system of the 600kg industrial ice making machine is simply designed with only one on/off button,aprotection relay system, an automatic time relay system, etc. With this automatic electrical system, the machine will automatically make ice, discharge ice and stop in electrical incidents.
၆၀၀ ကီလိုဂရမ် လျှပ်စစ်စနစ်ကို ခလုတ် ၁ ခု၊ ကာကွယ်ပေးသော စနစ် ၁ ခု၊ အော်တိုအချိန် အစားထိုးစနစ် စတာတွေနဲ့ ရိုးရှင်းစွာ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီစနစ်ကြောင့် လျှပ်စစ် ပြသနာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါ စက်က အော်တို ရပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Learn more about the manufacturing process of the IVA4T 4ton Industrial Stainless Steel Tube ice making machine
IVA 4T ၄ တန် စက်ရုံသုံး စတိန်းလက်စ်စတီး ရေခဲထုတ်စက်ရဲ့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာကြရအောင်
Operation process The operating process of the machine is automatic, closed, and straightforward. The entire operation only requiresafew simple actions on the smart panel. The control panel consists of2rows, in which the first row consists of the on/off button and the hardness adjustment button of the ice cube, and the second row contains the warning lights during operation such as to remind operational errors, ice discharge time, freezing time, and energy status.
လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်က အော်တို သီးသန့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးက စမတ်ကျသော ထိန်းချုပ်ဘောင်ပေါ်မှာ ရိုးရှင်းသောလုပိဆောင်မှု အနည်းငယ်သာ လိုပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာ အတန်းအစား နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာ ရေခဲတုံးရဲ့ မာကြောမှုကို ညှိပေးတဲ့ အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ပါဝင်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုတွင် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း လည်ပတ်မှု အမှားအယွင်း၊ ရေခဲဖြုတ်သော အချိန်၊ ရေခဲသော အချိန်၊ အင်နာဂျီအဆင့်တွေကို သတိပေးဖို့ သတိပေးချက် မီးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
The machine hasacompact size at 1600x1400x3200, smooth and simple operation.
စက်က ၁၆၀၀× ၁၄၀၀× ၃၂၀၀ အရွယ်အစား သိပ်သည်းသော ဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီး ချောမွေ့ကာ ရိုးရှင်းသော လည်ပတ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။
First, purified water, after being filtered, will be pumped onto the ice tank for the freezing process.
ပထမဆုံး ရေသန့်ကို ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါ အေးခဲသော လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ရေခဲတိုင်ကီထဲသို့ စုပ်တင်ပါမယ်။
R22 Refrigerant is used to freeze the ice. This isapopular solvent that is safe and friendly with the environment.
R22 အေးမြစေသော စက်ကို ရေခဲဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါက ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောကာ လုံခြုံသော နာမည်ကြီးသည့် ဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။
As an experienced and dedicated company in supplying ice machines, we are committed to providing our
customers with the best products at the most competitive prices.
ရေခဲစက်တွေကို ပေးပို့တဲ့နေရာမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို ကောင်းမွန်သော ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရောင်းချပေးနေကြောင်း ကတိပေးပါတယ်။
Call us now at 0949.41.41.41 forafree consultation.
၀၉ ၄၉ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အခမဲ့ ဆွေးနွေးလိုက်ပါ။
Hỏi đáp & đánh giá IVA 4T စက်ရုံသုံး ရေခဲထုတ်စက် (၁၀၀% အသစ်)